4 အားလုံးအလွှာ PCB Quickturn PCB FR4 TG180 ပစ္စည်းမြင့်မားသောတိကျ PCB 2oz အလွှာရွှေလက်ချောင်းများ 30U "ဘုတ်အဖွဲ့ - တရုတ်နိုင်ငံ4အားလုံးအလွှာ PCB Quickturn PCB FR4 TG180 ပစ္စည်းမြင့်မားသောတိကျ PCB ပေးသွင်း 2oz အလွှာရွှေလက်ချောင်းများ 30U "ဘုတ်အဖွဲ့,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » ရွှေ Finger PCB
241.3*203.2MM / 1UP
HASL + ရွှေလက်ချောင်း 30U”
4 TG180 ရွှေလက်ချောင်း 30U Layer”
4 အလွှာကိုရွှေလက်ချောင်းဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg180 ဖြစ်ပါသည်. 1.7မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. 2အောင်အားလုံးအလွှာကြေးနီ, အဆိုပါ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်4ကိုရွှေလက်ချောင်း 30U နှင့်အတူအလွှာ ". ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်း PCB ဒီဇိုင်နာ, စျေးပေါ circuit board ။ ကျနော်တို့ပစ္စည်း FR4 ရှိ, Roger, Arlon, Nelco, Taconic, Teflon, CEM-1, CEM-3, လူမီနီယမ်, HIGH TG ဘုတ်အဖွဲ့, အမြင့် CTI,
ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB2အလွှာ FR4 ENIG နျ Standard 1.5mm
2အလွှာ FR4 နျ Standard အဖြူရောင်မှင်အနက်ရောင်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်း PCB ထည်
Rigid board PCB, တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB2အလွှာစံ PCB 2oz FR4 TG135 HASL ခဲအခမဲ့ PCB.
4 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PCB လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ FR4 ပစ္စည်းအားဖြင့်အလွှာ PCB ENIG 2U "Quickturn PCB ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို